China Takatiswa & Ceramic Frit & Frosted-Low-E U Girazi / U Channel Girazi fekitori nevagadziri | Yongyu
Akadzvanywa U mbiri girazi rine ruvara girazi iro rinodzora ose anotaridzika uye anopenya transmittances.
Girazi rakapetwa rinenge rinoda nguva dzose kurapwa kwekupisa kuti ubvise kunetsekana kwemafuta uye nekupwanya uye rinoita kudzoreredza kupisa kwakadzika.
Yedu tinted U profile girazi zvigadzirwa zvinouya mumhando dzakasiyana uye zvinogadziriswa neyekutumira kwechiedza. Zvinokurudzirwa kuti udze chaiwo egirazi samples yechokwadi ruvara inomiririra.
Colored ceramic frits inodzingirwa pa650 degrees Celsius kumashure, mukati kumeso kwechiso cheU profile girazi ichipa iyo colorfast, yakasimba, yekumisikidza-isina kupera. Inowanikwa muhupamhi hwemavara akasiyana kusanganisira neakachenesesa akasimba ane ruvara.
Frosted U mbiri girazi
Frosted U mbiri girazi inopa kunze kuwedzeredza-kusanganisa, nechando chisvinu chinotapira. Iyo yekudzivirira inodzivirira inoiswa kuderedza mafingerprints. Pane nzira mbiri dzekuti uwane iyo frosted maitiro eU profile girazi: sandblasted uye acid-yakaiswa.
Yakadzika-E U mbiri girazi
Yakaderera-E, kana yakadzika-emissivity, girazi rakagadzirwa kuderedza huwandu hwe infrared uye ultraviolet mwenje unouya kuburikidza negirazi rako, pasina kuderedza huwandu hwechiedza chinopinda mumba mako. Mahwindo egirazi e Low-E ane macypcopically mutete coating ayo ari pachena uye anoratidza kupisa. Iko kukwirira kwakatetepa pane bvudzi remunhu! Iyo Yenguvo-E mipendero inochengetedza tembiricha mumba mako ichienderana nekuratidzira kupisa kwemukati mukati.
Isu takasvitsa Low-e yekubika tekinoroji muU mbiri girazi yekugadzira giraini kuti ipe hwakakura hwesarudzo dze U mbiri girazi.
Yepfuura: Ice Rink Glass Systems
Inotevera: Yakadzika Iron U Profa Girazi / U Channel Girazi Simba reGeneral System
Girazi U Channel
Girazi Wall U Channel Sisitimu
PaU Channel Girazi
To U Channel Girazi